समाचार प्रभाव: कटहरीको तरकारी उठ्ने
विराटनगर । मोरङको कटहरीमा उत्पादित तरकारी खेर गईरहेको प्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
किसानहरुले उत्पादित तरकारी वजारमा लैजान नपाउँदा बारिमै कुहिन थालेको गुनासो गरेपछि प्रदेश सरकारको समन्वयमा किसानको तरकारी उठ्ने भएको छ । कटहरीको तरकारी उत्पादक कृषि सहकारी संस्थाले किसानबाट तरकारी संकलन गर्ने भएको छ । यसको तयारीका लागि किसानसँग छलफल भईरहेको सहकारी संस्थाका अध्यक्ष धर्मलाल सिंहले बताउनुभयो ।
प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेको अग्रसरतामा आज भएको बैठकले कटहरीको तरकारी तत्काल उठाउने निर्णय गरेको हो । सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरे, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री राम राना, सरोकारवाला व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा बसेको बैठकले तत्काल तरकारी उठाउने निर्णय गरेको हो ।
कृषकबाट तरकारी सहकारी संस्थाले संकलन गरि कटहरीको तरकारी तथा फलफूल वजारमा जम्मा गरिने भएको छ । तरकारी बजारबाट उपभोक्ता समक्ष लैजाने निर्णय भएको तरकारी उत्पादक कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो । उहाका अनुसार कृषकको बारीमा अहिले एक हजार ट्रक गोलभेडा, काउली, बन्दा, भिन्डी, करेला बोडी रहेको छ । अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, ‘धेरै गोलभेडा बारीमै कुहेर गइसक्यो ।’ तरकारी भोलीदेखि संकलन हुने उहाँले बताउनुभयो ।
शनिबार, ०६ बैशाख, २०७७, साँझको ०५:१९ बजे
विराटनगर । बजारमा शक्तिवद्र्धक औषधिको माग बढेको छ । रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्न सहयोगी हुने विश्वासले कोरोना महामारीसँगै आयुर्वेदिक औषधिको माग बढेको हो । विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी फैलिएसँगै नेपालमा पनि संक्रमणको त्रास बढेको छ र धेरै व्यापार व्यवसाय
मोरङमा ६४ सहित प्रदेश १ मा ८६ संक्रमित थपिए
विराटनगर । मोरङमा ६४ जनासहित गएको २४ घण्टामा प्रदेश १ मा ८६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शनिबार दिएको जानकारी अनुसार शनिबार प्रदेशमा ५४ पुरुष र ३२ महिलालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमण
यङ हर्ट ग्रुपद्धारा कटहरीको वडा नं. १ निर्मलीकरण
विराटनगर । बिहीबार कोरोना पोजिटिभ भेटिएको कटहरी गाउँपलिका वडा नं. १ को उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्रलाई निर्मलीकरण गरिएको छ । स्थानीय युवाहरुको क्लब ‘यङ हर्ट ग्रुप’ ले संक्रमित भेटिएको घर वरिपरिको क्षेत्रलाई शनिबार निर्मलीकरण गरेका हुन । कोरोना संक्रमणलाई थप
छुट्टै पिसिआर मेसिन खरिद गर्दै महानगर
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले कोरोना भाइरस परीक्षणमा हुँदै आएको ढिलासुस्ती व्यवस्थापन गर्न छुट्टै पिसिआर मेसिन खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । स्वाब संकलन गरेको निकै दिनपछि मात्र परीक्षणको रिपोर्ट आएको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना हुने क्रम बढेपछि महानगरपालिकाले पिसिआर मेसिन खरिद
सुनसरीको नरसिंहमा एक युवाको हत्या
सुनसरी । सुनसरीको नरसिंह गाउँपालिकामा एक जना युवाको विभत्स तरिकाले हत्या भएको छ । भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका २१ बर्षिय युवा गुनानन्द यादवको हत्या भएको हो । विभत्स ढंगबाट हत्या गरी स्थानीय सुनसरी खोलामा उनकोे शव फालिएको अवस्थामा फेला परेको जिल्ला
बीपी प्रतिष्ठानलाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन कार्यदल गठन
विराटनगर । सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ। काठमाडौंमा भएको प्रतिष्ठानको ४४औं सिनेट बैठकले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलको सदस्यसचिवमा प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार
विराटनगर । बजारमा शक्तिवद्र्धक औषधिको माग बढेको छ...
विराटनगर । मोरङमा ६४ जनासहित गएको २४ घण्टामा...
ओली र मोदीबीच फोनवार्तामा के कुरा भयो ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय...
प्रदेश सरकार असफल भएको काँग्रेसको आरोप
विराटनगर । नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदेश नम्बर १ सरकार...
विराटनगर । बिहीबार कोरोना पोजिटिभ भेटिएको कटहरी गाउँपलिका...
फेसबुकमा नांगो फोटो राखेपछि हत्या
विराटनगरको कोभिड अस्पताल : न अक्सिजन चल्छ, न त भेन्टिलेटर
विराटनगरका ३८ संक्रमित अस्पताल पुग्न पाएनन्
विराटनगरमा एकैदिन ६० संक्रमित थपिए, कुन वडामा कति ?